UkuCofa kunye nokuGcina amaqhosha kunye neeIcon kwi-iPhone yakho
NguJoe Hutsko, uBarbara Boyd
Icandelo le-iPhone Zonke-in-One zeDummies Cheat Sheet
Kwi-iPhone yakho, ukuba ufuna ukuvula usetyenziso, gcwalisa indawo yokubhaliweyo, okanye ukhethe umyalelo onje ngokuPrinta okanye uMyalezo, ucofe i icon efanelekileyo, umhlaba, okanye iqhosha. Cofa inombolo yefowuni kwaye i-iPhone ibuza ukuba uyafuna na ukubiza inombolo, cofa i-URL kunye nokwazisa kweSafari ukuvula iphepha lewebhu, okanye ucofe umhla okanye ixesha kunye nemenyu enikezela ukwenza umsitho okanye ubonise umhla okanye ixesha kwikhalenda.
Impompo kunye nokubamba isenzo kuvula elinye ilizwe lemiyalelo kwi-iPhone yakho:
Umfanekiso: Cinezela kwaye ubambe umfanekiso ukuze ubone i Gcina umfanekiso okanye Khuphela amaqhosha. Cofa olunye lolo khetho ukwenza lo msebenzi.
Umbhalo: Cofa ubambe isicatshulwa ukuze ubone amaqhosha okuhlela afana noKopa, Chaza, Khetha, okanye Khetha konke. Cofa elinye lamaqhosha ukwenza umsebenzi.
Inombolo yomnxeba: Imenyu yokukhetha ivula equka ukufowuna (inombolo) kunye noMyalezo wokuThumela (kwinombolo), Yongeza (inombolo) kubafowunelwa, okanye Kopisha.
Ngaba i-xanax yi-opioid
Nawuphi na uphawu kwisikrini saseKhaya: Cinezela kwaye ubambe ezi icon kude kube ziqala ukujikeleza kunye nokugigitheka. Emva koko cofa i-X kwikona ukucima usetyenziso kwi-iPhone yakho okanye ucofe kwaye ubatsalele kwindawo entsha.
Amakhonkco kwiSafari: Thepha kwaye ubambe ikhonkco kwiphepha lewebhu eSafari emva koko ucofe ukongeza kuLuhlu lokuFunda ukongeza iphepha elidibeneyo kuLuhlu lwakho lokuFunda ngaphandle kokuvula ikhonkco. Ngenye indlela, cofa u-Vula ukubuyisela iphepha olibonayo okanye uvula kwi-Tab eNtsha ukuvula iphepha elidityanisiweyo kwithebhu entsha ngelixa ugcina iphepha esele livulekile, okanye ucofe uKhuphelo okanye Gcina umfanekiso ukuze wenze ezo ntshukumo.
zithini iziphumo ebezingalindelekanga ze-estradiol
Kwikhibhodi ekwisikrini, kunokuba ucofe kwaye ubambe, ucofe kunye nesilayidi ukwenza oku kulandelayo:
Isitshixo se-123: Cofa eli qhosha ngaphandle kokuliphakamisa, thambekisa umnwe wakho kwinani okanye kwiziphumlisi ozifunayo, emva koko uyeke. Inani okanye iziphumlisi zifakiwe kwisicatshulwa sakho kwaye ikhibhodi ibuyela koonobumba, ekugcina usicofa isitshixo se-123, ucofe inombolo oyifunayo, emva koko ucofe iqhosha le-123 kwakhona ukubuyisela ikhibhodi kwiileta.
Ichaphaza (.) Isitshixo: Ukungadideki nexesha, eli qhosha libonakala ngasekhohlo kwe-Go okanye Return Return xa isikhombisi sikumhlaba wedilesi ye-imeyile okanye indawo ye-URL yesikhangeli. Thepha kwaye ubambe xa uchwetheza i-imeyile okanye idilesi yewebhu ukuvula imenyu yokuma kunye nezinye izimamva zedomain, ezinjenge .com, .net,. org, okanye .eu. Silayida umnwe kwisimamva sedomain ofuna ukusisebenzisa uze uphakamise umnwe.
Iileta kunye neesimboli: Cinezela kwaye ubambe ukuveza umxholo wemenyu yoonobumba okanye iisimboli. Umzekelo, cofa ubambe u-S kwikhibhodi ukubona ukhetho lwe-ß, ś, kunye ne-š. Slayida umnwe kwileta okanye isimboli ofuna ukuyisebenzisa; emva koko phakamisa umnwe ukuze uyifake kwisicatshulwa osichwethezayo.
Uyenza njani ifayile ye-css
i-azithromycin ngaphezulu kwekhawuntari ye-chlamydia
uyifaka njani kwi-catheter